ဂျင်မ် Irsay ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Genius Martech Zone
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Indianapolis Colt သည် Tennessee Titans များကိုအနိုင်ယူပြီး AFC တောင်ချန်ပီယံဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ဂိမ်းမစမီ Colts ပိုင်ရှင် Jim Irsay သည် Twitter တွင်အရောင်တောက်ပသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှ Irsay ၏တွစ်တာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။
PRUSUS နှင့် $ 4K ၀ င်ရန် - ယနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၁း၁၅ နာရီတွင်လူးကပ်စ်ရေနံအားကစားကွင်းအပြင်ဘက်မြောက်ဘက်အပြင်ဘက်ရှိအခင်းဖြစ်သည့်အနက်ရောင် Prius တစ်ခုရှိသည်။
PRUSUS နှင့် $ 4K ၀ င်ရန် - ၀ င်ရောက်သူများသည်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ Twitter.com တွင် @jimirsay နောက်လိုက်ရမည်။
လူကြိုက်များသော PRUSUS နှင့် $ 4K - တစ် ဦး လျှင် ၀ င်ခွင့်ရရန်အတွက်စာရင်းများစွာကသင့်အားအရည်အချင်းမပြည့်မှီစေပါ။
PRUSUS နှင့် $ 4K အနိုင်ရ - ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၁ နာရီမှာငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးမည်။ သင်သည်သင်၏အဖြေကို tweeting အားဖြင့်ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
PRUSUS နှင့် $ 4K - အောင်နိုင်ရန် - ဥတုတွစ်တာတွင်သင်၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြပြီးသင်၏ @jimirsay နှင့် #gocolts များထည့်ထားရမည်။
ဒီမြှင့်တင်ရေးဒီလိုမျိုး၏သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်များကိုပယ်ချကြပါစို့။ သင်တန်ဖိုးရှိသောဆုတစ်ခုကိုမည်သည့်အချိန်မဆို ပေး၍ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားသည်။ သစ္စာရှိမှုကိုသင်ခိုင်ခံ့စေသည်။ လူများစွာကိုသင်ပျော်ရွှင်စေပြီးလူတစ်ယောက်သည်လွန်စွာပျော်ရွှင်နိုင်သည်။ ပြိုင်ပွဲများများသောအားဖြင့်ကြီးလှ၏။
သို့သော် Colts စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝတောက်ပသောအရာတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကတိကျတဲ့ Colts ပရိတ်သတ်တွေနဲ့တွစ်တာလက်ကိုင်စာရင်းကိုထူထောင်ခဲ့တယ်။
စဉ်းစားကြည့်! ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်သန့်ရှင်းသော၊ တိကျသော၊ အပြန်အလှန်ကိုးကားထားသောဒေတာဘေ့စ်လိုအပ်သည်။ တွစ်တာကဲ့သို့သောနည်းပညာအသစ်များပေါ်ထွန်းလာခြင်းသည်လူတို့ထံရောက်ရှိရန်နည်းလမ်းသစ်များရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပရိသတ်များအားတွစ်တာအကောင့်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ဥပမာ - တွစ်တာအသုံးပြုသူကိုကြည့်ပါ DeadStroke96 @။ သူကသူ့ Tweets ကိုဖတ်ရုံနဲ့သူ NFL ပရိသတ်ကြီးလို့ပြောနိုင်တယ်။ သို့သော်သူသည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသိရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ဤအသုံးပြုသူသည်သူ၏တွစ်တာပရိုဖိုင်းတွင်နာမည်မပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့လူတော်တော်များများဟာ online မှာ alias၊ first name ဒါမှမဟုတ် nick name ကိုပဲသုံးကြတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး အပေါ်သင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်တရားဝင်အချက်အလက်အားလုံး၊ ဥပမာ ၀ ယ်ခြင်းသမိုင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေတာဘေ့စများနှင့်အပြန်အလှန်ကိုးကားရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမရှိပါ။
အခုတော့ Jim Irsay (နှင့်လူတိုင်း) @ DeadStroke96 ဆိုတာသိပြီ George Ketchman ၊။ ဤပြိုင်ပွဲအတွက်ဆန္ဒရှိသူများသည်ရာနှင့်ချီ - မဟုတ်လျှင်ထောင်နှင့်ချီ။ ဆန္ဒအလျောက်ပေးခဲ့ကြပုံရသည်။ သင့်ကိုယ်သင်ကြည့်ရှုရန် Twitter Search သို့သွားပါ။ (ရလဒ်များကိုကျဉ်းမြောင်းစေရန်“ #gocolts @jimirsay footballs” ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ )
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခု ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့် အလုပ်ကိုအခြားလူများသို့ပြောင်းရန်ဖြစ်သည် Colts သည် Jim Irsay ၏နောက်လိုက်များအားလုံးကိုရှာဖွေရန်မရေမတွက်နိုင်အောင်နာရီပေါင်းများစွာအကုန်ခံပြီးသူတို့၏တရားဝင်အမည်များကိုရှာဖွေရန်သူတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များနှင့်တွစ်တာများကိုကြည့်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပြိုင်ပွဲကိုပဲပြိုင်နိုင်ပြီးလူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခိုင်းနိုင်တယ်။
ကောင်းသောအလုပ်ဂျင်မ် Irsay နှင့် Colts စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့!
Tags: မြင်းကလေးJim irsayစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ3နာရီ 20 မိနစ်
ဒါပေမယ့်…. $30,000 တန်သလား။ ပြီးတော့ သူတို့က ဒေတာနဲ့ ဘာမဆို လုပ်မှာလား။
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ5နာရီ 24 မိနစ်
အကြံကောင်းတစ်ခုပါ… ဒါပေမယ့် ROI ဆိုတာဘာလဲ။ စနေနေ့ @jimirsay မှာ ပရိုမိုးရှင်းအကြောင်း တွစ်တာဖတ်တုန်းက အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Follower 18,000+ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုမှ 20,000+ ဖြစ်နေပြီ။ ကုန်ကျစရိတ်က နောက်လိုက်အသစ် နှစ်ထောင်ဖိုးရှိလား။
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ6နာရီ 11 မိနစ်
ကုန်ကျစရိတ်က ဒေါ်လာ 30k နီးပါးလောက်ရှိမယ်လို့ သံသယရှိတယ်။ ငွေသား အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၄ ထောင် ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုအချို့နှင့် လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် ကားကို တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
Colts များသည် ဒေတာကို အသုံးပြုပါက၊ ၎င်းသည် လုံးဝ $4,000 တန်ပါသည်။ Irsay ၏နောက်လိုက်အားလုံးကို တကယ့်လူအစစ်များနှင့် ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် ကြီးမားသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် ရက်သတ္တပတ်များစွာ အချိန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင်ဖော်ပြ၍မရသော တွစ်တာအသုံးပြုသူအများအပြားကို အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပေ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ထပ်အချက်အလက်တစ်ခုရှိသေးတယ်- ဘယ်သူမဆို ဒီစာရင်းကို Colts တွေတင်မဟုတ်ဘဲ အခုပဲရနိုင်မှာပါ။ အဲဒါက ဒီကမ်ပိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခြားအရာတွေကို ပြောပြသင့်တယ်။
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 10 နာရီ 37 မိနစ်
ထို့နောက် 'အရွယ်အစားကြီးမားသောအသင်း' ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 1 မိနစ်တိုင်း လူ3ဦးကို ကိုးကားနိုင်သည် သို့မဟုတ် တစ်နာရီလျှင် 20 ကို ဖြတ်ကျော် ကိုးကားနိုင်သည်ဟု ပြောပါ။ Follower 20,000 အတွက်၊ သင်သည် လူလုပ်အား နာရီ 1000 ကို ကြည့်နေသည်။ အဲဒါကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ $10/hour data entry position မှာ ပစ်ချလိုက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်အတွက် နောက်ထပ် $10,000 ရနေပါပြီ။ ကားအလကားဖြစ်လျှင် ယခု $14,000 သို့ပြန်သွားသည်၊ ၎င်းသည် လျှော့စျေးဖြင့် $30,000+ သို့ပြန်သွားပါပြီ။
(အိုး၊ တစ်ပတ်လောက်ကြာရင် search.twitter.com က အားလုံးကို ရှင်းမပြခင် ဒီနေ့ ဒီကစလုပ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ ဟားဟား။ 🙂)
Irsay သည် လူအများကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေခြင်း၊ လူများစကားပြောဆိုခြင်းစသည်တို့ကို ဖန်တီးရာတွင် ထူးချွန်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသင့်သည့် ဒေတာများကို အသုံးချရန် အားလုံးက သူ့ကို နှစ်သက်ကြမည်ဟု ထင်မြင်မိသော်လည်း လက်တွေ့တွင်တော့ ထိုသို့ဖြစ်မည်ဟု မထင်ပါ။
သူ့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ Colts (နဲ့ သူ့ကို) အကြောင်းပြောပြီး စိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်ပြီး သူ့မှာ ပိုက်ဆံအများကြီးရှိပြီး ပစ္စည်းတွေကို ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆက်လက်ပြသပါ။ အဲဒီ့မှာ သူအောင်မြင်ခဲ့တာလား။ ဟုတ်။
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 10 နာရီ 22 မိနစ်
ROI သည် Twitter followers Steve တွင်သာ မဟုတ်ပါ။ ဤကဲ့သို့ ကျဆင်းနေသော အရာတစ်ခု၏ ROI ကို သင် ဘယ်လိုမှ တိုင်းတာလို့ မရပါဘူး။ Irsay သည် မြို့တစ်မြို့လုံးတွင် လူသိရှင်ကြား ကြော်ငြာနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ မျက်နှာစာနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်လိုက်မည်မျှ ရှိသည်နှင့် မပတ်သက်ပါ။ ငါတို့လို မားကတ်တင်းသမားတွေဆီကရတဲ့ အရက်ဆိုင်အားလုံးအတွက် အရမ်းတန်ပါတယ်။ ဂိမ်းများသည် ကြိုတင်ရောင်းအားကောင်းသောကြောင့် Colts သည် အရောင်းအ၀ယ်မှလွဲ၍ ၎င်းတို့၏ ROI ကို မြှင့်တင်ရန် နေရာမရှိပေ။
ဇန်နဝါရီ 4, 2011 မှာ 2: 07 AM
Colts သည် လက်မှတ်များမှတစ်ဆင့် ၀င်ငွေရရှိနိုင်သည်... သို့သော် ပံ့ပိုးကူညီမှုအားဖြင့် အနည်းငယ်ရရှိပါသည်။ စပွန်ဆာများသည် အရေအတွက်များစွာအတွက် ပေးဆောင်ကြသည်။ ပုံမှန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် မတူဘဲ အားကစားအဖွဲ့များ၏ ပရိသတ်များသည် ဝိုင်းအုံနေကြသည်။ ဒီတော့ ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုက Colts fan ရဲ့ တစ်သက်တာတန်ဖိုးက ဘယ်လောက်လဲ။ Jim Irsay က ဒါကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် Colts ပရိသတ်တွေကို ဖန်တီးခဲ့တာလား။ သူလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်။ လူတွေက အမြဲတမ်း အသင်းလိုက်လုပ်ရတာကို ငြီးငွေ့နေကြတယ်... ဒါက နည်းနည်းလေး ပြန်ပေးတာ ကောင်းတယ်။
ဇန်နဝါရီလ 11 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ2နာရီ 45 မိနစ်
ROI၊ နောက်လိုက်များ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် မပတ်သက်ပါ။ အဓိပ္ပာယ်ထက် ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့ ဘီလျံနာတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တဆန်တဲ့ လှည့်ဖြားမှုတွေအကြောင်းပါ။ တကယ်ဆို... သူက Jerry Garcia ရဲ့ ဂစ်တာအတွက် $1M ပေးခဲ့တယ်။ ဒေါ်လာ 30k နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတကယ် စိတ်ပူနေသလား။
ဇန်နဝါရီ 12, 2011 မှာ 3: 45 AM
ငွေကြေးနှင့် အသိတရားသည် တူညီခြင်းမရှိဟု ကျွန်ုပ်သဘောတူသော်လည်း Irsay သည် အတ္တဆန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်သဘောတူသည် မသေချာပါ။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ Irsay သည် မီးမောင်းထိုးပြခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ဖြစ်နိုင်သမျှ အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော် သူနဲ့ အဆက်အသွယ်အများကြီးရှိတဲ့သူတစ်ချို့နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီး သူက အရမ်းနူးညံ့တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောဖူးတယ်။ သင်ရှာဖွေမှုအချို့ပြုလုပ်ပါက၊ သူသည် အင်ဒီယားနားတွင် အလှူအတန်းများစွာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဇန်နဝါရီ 12, 2011 မှာ 2: 45 AM
ကားကို ဘယ်သူက တကယ်အနိုင်ရခဲ့တာလဲ။
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ3နာရီ 32 မိနစ်
ကျွန်တော် Brad နဲ့ ဒီလိုမျိုး၊ Robby သည် Colts သည် အချက်အလက်များကို လွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကြီးမားသော ယူဆချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုးဆုံးတွေထဲက တစ်ခု (သူ့မှာ မရှိလုနီးပါး ဖြစ်နေလို့) သူတို့မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဖွဲ့အတွက် လူမှုကွန်ရက်မှာ ရှိနေတာကို မြင်နေရလို့ အဲဒီ ရှေ့မျက်နှာစာမှာ အကောင်းဆုံး သံသယဖြစ်မိပါတယ်။ ယခုအခါတွင် ၎င်းတို့၏ပရိသတ်များသည် ၎င်းတို့အတွက် အွန်လိုင်းတွင် လေလံဆွဲမှုများစွာ ပြုလုပ်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် Irsay သည် ၎င်း၏အသိစိတ်နှင့် လက်မှတ်များနှင့် ကားများကို ပေးဆောင်နေခြင်းကြောင့် အဖွဲ့အစည်းသည် ဉာဏ်ကောင်းသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ပြိုင်ပွဲ၏ ကန့်သတ်ချက်များသည် ဂျင်မ်၏နားထဲသို့ တွစ်တာ ဗဟုသုတ ရှိသူကို ညွှန်ပြသည်။ Doug နှင့်သူ၏သူငယ်ချင်း Pat Coyle သည် I ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် Colts နှင့်စကားပြောနိုင်သည်။ အခြားတန်ဖိုးမှာအလားအလာရှိသောအနာဂတ်စပွန်ဆာများအတွက်ဖြစ်သည်။ တိုယိုတာသည် ဂျင်မ်နှင့် ၎င်းတို့၏ပြည်တွင်း အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံမှ အကူအညီပိုရနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို မကြော်ငြာဘဲ တတ်နိုင်သလောက် အသုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Colts နှင့် လက်တွဲလိုသော လူမှုဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဤကဲ့သို့သော သဘောတူညီချက်ဖြင့် ၎င်းတို့၏ ခုတ်ထစ်မှုများကို လျှာဖြင့်လျက်နေလိမ့်မည်။ Colts အတွက် ကုန်ကျစရိတ်က ကားအတွက် ဘာမှမဖြစ်နိုင်သလို Toyotas အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းမှုကြောင့် (သူတို့က ဒေါ်လာ 20k အောက် ကားတစ်စီးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်နိုင်သည်) Colts အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ Colts က ဆုတွေ ပိုရခဲ့မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။ ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များကို ပတ်၀န်းကျင်တွင် တည်ဆောက်ထားသော်လည်း လူသိရှင်ကြား မထိခိုက်ပါ။ Irsay ၏ tweets များကို စစ်ထုတ်ခြင်းမပြုဘဲ မားကတ်တင်းရှုထောင့်မှကြည့်ရခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုးတက်မှုအတွက် နေရာများစွာကို မြင်နေရဆဲဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ6နာရီ 07 မိနစ်
ဒါမှမဟုတ် Robby က သူ့ပါးပြင်မှာ သူ့လျှာကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်တယ်။
ဒီလိုဆိုရင် ကောင်းကောင်းကစားပါ ခင်ဗျာ။
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 10 နာရီ 24 မိနစ်
ဇန်နဝါရီလ 11 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ2နာရီ 43 မိနစ်
သူက သန်းကြွယ်သူဌေးပါ။ သူ အိပ်ယာမှထရန် ဒေါ်လာ 30k အကုန်အကျခံသည်။ အလေးအနက်ပြောရရင် ငွေနဲ့မပတ်သက်ပါဘူး။ အဲဒါ အတ္တအကြောင်းပဲ။
ဇန်နဝါရီ 4, 2011 မှာ 4: 24 AM
တော်တော် လန်းတာပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 4, 2011 မှာ 4: 26 AM
Jim Irsay ၏ ကား/ငွေသား ပေးလှူမှု စည်းမျဉ်းများ အရ၊ သင်၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တွင် ပေါ်လာသည့်အတိုင်း သင့်အမည်ကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သော တွဒ်။ ၎င်းသည် ဒေတာတူးဖော်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ လိမ်လည်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ သူ့တွင် လူတစ်ဦးလျှင် တွစ်တာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ သင်သည် တွစ်တာအများအပြားအတွက် အရည်အချင်းမရှိပေ။ “အမည်အပြည့်အစုံ” စည်းမျဉ်းသည် တွစ်တာအကောင့်များစွာရှိသူတစ်ဦးထံမှ မှန်းဆချက်များစွာကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 11 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ2နာရီ 41 မိနစ်
ပရိုမိုးရှင်းနောက်ကွယ်မှာ ပါရမီရှင်တွေရှိတယ်ဆိုတာ ယုံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မတော်တဆမှု ဖြစ်သော်လည်း ဉာဏ်ကြီးရှင် မဟုတ်ပေ။
ဇန်နဝါရီလ 15 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ6နာရီ 54 မိနစ်
နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက် (@jimirsay) က Twitter ထဲဝင်ပြီး စုဆောင်းဖို့ နှစ်နဲ့ချီကြာတဲ့ follower အရေအတွက်ကို ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ အမြဲတမ်း နှိမ့်ချစရာပါပဲ။